Tobankii sadex baa ka booda dugsiga sare - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tobankii sadex baa ka booda dugsiga sare
La daabacay måndag 11 juni 2012 kl 16.08
Tobankii sadex ardeyda dalkaan ayaaka booda dugsiga sare ee sadexda sanno ah, sidaas waxaa muujinaya tirokob cusob ay soo bandhigtay ururka Iskutaga Degmooyink iyo Gobalada Sweden (SKL).
Demada ugu liidata ayey 40% dugsiga sare sadex-sanno gudahood ku dhameeyey, halka tan ugu fiican ay 88% ku dhameeyeen sadexda-sanno gudaheed sida ay muujinayso daraasado. Tirokoobkaan ayaa ah mid cusob, lakiin waxa uu quseeyaa ardeydii bilowday dugsiga sare sannadyadii 2005-2007. Afar- sanno ka bacdii afar meelood ardeydaas ayaa dhamaynin dugsiga sare oo qaadan shahaado dhamaystiran.
Wiilasha weeyaan kuwo dugsiga sare ka booda marka loo barbardhigo gabdhaha kuwaas oo dheer gabdhaha 3-5%. Xisaabtaan waxay ku saabsan tahay ardeyda aan ku dhamaynin sadex, afar ilaa shan-sanno dugsiga sare tan iyo inta ay bilaabeen waxbarashada dugsiga sare.
Ardeyda dhigata qaybta tababarka shaqa (yrkesförberedande program) weeye kuwo u badan oo ka booda marka loo barbardhigo ardeyda barata barnaamijka u diyaar garowga tacliinta sare (studieförberedande program). Ka boodida dugsiga sare ayaa u badan kalaaska sadexaad, sida ay SKL ku qortay bogeeda.